Kubadaha Cadaadiska Unicorn, Unicorn Squishy Toys, Cadaadiska Cadaadiska - Meibaoli
Ku soo DHAWOOW Meibaoli
kalgacayl & dadaal
Weifang Meibaoli Sponge Products Co., Ltd wuxuu ku yaalaa magaalada Weifang, gobolka Shandong, Shiinaha. Goob juquraafi ahaan ka sarraysa, oo ku dhow dekedda Qingdao waa gaadiid aad u habboon oo hubiya in si dhakhso leh loo gaarsiiyo. Meibaoli Sponge Products Company waa in ka badan 10 sano soo-saare xirfadle ah oo ku hawlan soo saarista noocyo kala duwan oo badeecado isbuunyo ah, sida kubbadaha ka hortagga walbahaarka ee loo yaqaan 'PU', alaabada lagu ciyaaro, safafka U qaabeynta barkimooyinka, barkimooyinka xusuusta hurdada, xafiisyada barkinta iyo isbuunyada qurxinta qurxinta. Wax soo saarku waa kuwo tartan badan oo tayo sare leh iyo qiimo aad u wanaagsan kuwaas oo si weyn loo aqbali karo oo si diirran loogu soo dhoweeyo suuqyada adduunka. Waqtigan xaadirka ah, badeecooyinkan waxaa loo dhoofiyay dalalka Kanada, Mareykanka, Yurub iyo Bariga-Dhexe.
Takhasusay waxyaabaha PU xumbo.
xusuusta xumbo gel barkinta sariirta
Xusuusta barkinta gel xumbo
U qaabeeya barkin safarka
Jilicsan pu xumbo frisbee
Kubadaha gargaarka culeyska
Alaabta carruurtu ku ciyaaraan
Duubista duugista Yogo & kubadaha
Haddii aad fursad u hesho wadashaqeyn ama nooc kasta oo weydiin ah, jawaab celin ah, waxaan jeclaan lahayn inaan kaa maqalno.
Muunado Caadi ah Ayaa La Heli Karaa
La jaan qaado wakhtiyada, hormoodka oo wax cusub abuuri, oo ugu adeeg wadashaqaynta caalamiga ah "ku-guuleysiga" dabeecadda.
Ukunta qurxinta waa shey aan u wada isticmaalno isku qurxinta. Waxaa jira noocyo badan oo ukumo isku qurxin ah oo suuqa yaala, laakiin saameyntu waa isku mid. Ka dib markaad isticmaasho ukunta qurxinta, nadiifinta waa lama huraan. Ma taqaanaa sida loo nadiifiyo ukunta qurxinta? Maanta, waxaan ...
Barkinta ugu fiican ee leh saameyn daaweyn ah oo ku dhaca qanjirrada ilmo-galeenka ayaa ah barkin xumbo ah oo kuleylka kuleylka ah. Guud ahaan, dadka qaba laf-dhabarka ilmo-galeenka oo liita waxay doortaan barkimooyin Kangjin Shule ah oo ka samaysan barkimooyin xumbo kulul oo kuleyl ah, maxaa yeelay qaabka ...
Barkin qaldan, oo ka cabaneeysa laf-dhabarka ilmo-galeenka Barkimooyinku waxay door muhiim ah ka ciyaaraan hurdada dadka. Barkin ku habboon ayaa kaa caawin karta inaad si macaan u seexato. Si kastaba ha noqotee, isticmaalka muddada-dheer ee barkin aan habboonayn wuxuu sababi doonaa taxane ah noocyo isdaba joog ah oo xitaa horumaraya ...
Barkimadu waa nooc ka mid ah qalabka hurdada. Waxaa guud ahaan la rumaysan yahay in barkimooyinku yihiin filleyaal ay dadku u isticmaalaan inay si raaxo leh ugu seexdaan. Sida laga soo xigtay cilmi-baaris caafimaad oo casri ah, laf-dhabarka bini-aadamka waa xariiq toosan oo xagga hore ah, laakiin wuxuu leeyahay afar jir ahaan oo qalloocan ...
Barkimooyinka xumbada Memory-du waxay ka kooban yihiin xumbo cufan oo dib ugu laabanaysa qaabkeedii hore hurdada ka dib waxayna caadiyan bixiyaan qoorta oo aad u fiican. Kuwani waa caan sababtoo ah waxay yareeyaan dhibcaha cadaadiska iyagoo si isdabajoog ah wax u beddelaya ...
Shiinaha Xudduudaha E-Commerce Trade Fair (Fair KWA) waa dhacdo ganacsi ganacsi oo loo qabtay in lagu dhexgeliyo ilaha silsiladda bey'ada E-commerce ee xuduudaha ka gudba isla markaana siiya alaab-qeybiyeyaal tayo leh iyo fududeeye dhufaysyada xuduudaha iyo ...
Mawduuca Shiinaha ee 'Zodiac Theme Squishy Gel Pen' Iyo Buug Xusuusin Waa Wel ...
Shirkaddeenu waxay leedahay laba iyo toban mawduuc xayawaanno xayawaan ah oo china ah iyo buug yar, oo ay abuureen naqshadeeyayaal badan, fikradaha wax soo saarkeenna waxaa ku dhiirrigeliya sheekooyinka bey'adeed ee Shiinaha ee dhaqanka Shiinaha. Zodiacka Shiinaha waa Zodi Shiine ah ...